From: somali media watchers(SMW)
Sida aan la socono laanta afka soomaliga ee BBCdu waxey aheyd hayada kaliya ee wararkeeda la tix geliyo himad gaar ahna umada soomaliyeed u heyn jirtey. Hase yeeshe waxaa mudo socotey hadal-hayn iyo tuhumo bulshadu ka qabtey xaalada BBCda taas oo aheyd in ay isu bedashey goob hadba qoladii gacanta ku heysaa amuuraheeda ku fushato ahna makhaayad ninkii markaas qorya heystaa shito! Waxey dad badani carabka ku dhufteen in BBCdu garab dhiibisey shuruucdii iyo qawaaniintii warbaahinta salkeeduna noqdey mid ku shaqeysa eex, isku dir, dagaalada sokeeyana laga kobciya.
Hadaba waxaa dhowaanahan socdey eedeymo ba’an iyo fadeexado loo tirinayo idaacada BBCDA oo bulshada qaarkood isla dhex mareyso kuna saabsan markii Col. C.lahi Yusuf ku yimi cariga Ingiriiska(London) safar caafimaad isla markaana ah goobta fariisinka u ah Idaacada BBCda waxeyna dadka badankood isweydiinayaan:
1- Sababta BBCdu uga hadli weydey Imaatinka Col. C/lahi oo ah shaqsi aan qarsoomi karin lana ogaa in uu magaalada ku sugan yahey?
2- Sababaha kalifey ee BBCdu uga hadli weydey mudaharaadyada ka dhanka ahaa Korneylka ee ka dhacey meelo kala gedisan sida barlamaanka? Sidoo kale dacwooyin garab socdey oo ay wadeen dadkii sheeganayey in uu dadkoodii xasuuqey hase yeeshe BBCdu ka gaabsatey walowba la sheegay in bbcdu la socotey goob joogna ka ahaayen dhacdooyinkan.
Intaas dabadeed waxaa sii xoogsadey tuhun ku jirey bulshada aan wali jawabta u helin su’aalaha kore ka dib markii idaacada BBCdu wareysi ka soo qaadey saacadihii u dambeyey Col. c/lahi yusuf iyaga oo ugu yeeraya magaca “madax-weyne”.
Sidaas awgeed waxaan anaga (somali media watchers) oo ka turjumeyna shucuurta iyo dareenka Bulshada ugu baaqeynaa idaacada BBCda iyo waliba saxaafadaha madaxa banaan ee wax ka qora/ka hadla amuuraha Soomaliya in ay:
· Ilaaliyaan sharaftooda iyo magacooda kana feejignaadaan laaluushka, qabyaalada, eexda, nin jecleysiga, isku dirka, iyo beenta.
· Ilaahey ka cabsadaan ogaadana in saxaafadu tahey aalad loo adeegsan karo nabada iyo colaada.
· Umada ugu adeegaan si hufan dhex-dhexaadna noqdaan iskuna dhiiri geliyaan in ay ka shaqeeyaan sidii nabad loogu soo dabaali lahaa danta umada, dalka iyo diinta.
Waxa baaqan si wada jira u soo saarey:
23 qof oo isugu jira Profosooro, Dr.ro, Injineero iyo aqoonyahan kale , magacyadooda waxaa lagala xiriirikaraa cinwaanka hoos ku qoran.
Somali Media Watchers waxey xiriir la sameynaysaa idaacada BBCda si ay jawaab uga soo bixiyaan amuurtaan wixii jawaab ahna waan idin la soo socodsiineynaa hadii eeebe idmo. Sidoo kale waxaan xiriir la sameyn doona talona u jeedinaynaa si hagar la’aan ah saxaafadaha xad gudubka sameeya.
Kala xiriir wixii faah-faahinah madaxda Ururka Somali Media Watchers (SMW)
Dr: osman haji or Fartun Ayanle